Global Voices teny Malagasy » Espaina: “Manana Fitadidiana Izahay, Mila Ny Rariny Izahay” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Febroary 2012 22:51 GMT 1	 · Mpanoratra Chris Moya Nandika (en) i Elizabeth Rivera, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Eoropa Andrefana, Espaina, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Mpitsara manana ny lazany ao Espaina, Baltasar Garzón, no voampanga ary voarara tsy hanao ny asany mandritra ny 11 taona  noho ny fanomezany baiko ny fametrahana tsy ara-dalàna fitaovam-pandraisam-peo tao am-ponja mba hihainoana ireo resaka ifanaovan'ny voafonja sy ny mpisolovavany tamin'ny raharaha Gürtel. Raharaha mikasika ny fanodinkodinam-bolam-panjakana izay niafara tamin'ny fandroahana mpikambana am-polony tao amin'ny Antokom-bahoaka (Parti Populaire) izany (antoko ankavanana mitarika ny governemanta ankehitriny).
Voampanga ho nanao fahadisoana goavana nandritra ny fanatanterahana ny asany ilay mpitsara Garzón rehefa nanao fanambarana fa ao anatin'ny asany ny fanaovana famotorana mikasika ny famonoana olona nandritra ny ady an-trano espaniola sy nandritra ny fitondran'ilay mpanao didy jadona Franco; izay nahatonga ireo fampahalalam-baovao iraisam-pirenena, mpanao politika  ary olom-pirenena an-jatony  naneho ny fahatafintohinany sy ny fahatairany noho ny didy nivoaka. Mbola tsy nisy ny fanasaziana ny heloka bevava nihatra nandritra ny ady an-trano sy nandritra ny fitondran’ ilay mpanao didy jadona Franco.
Nanambara ny tsy fankatoavany ny fandresen-dahatra tamin'ny filazana an-gazety ilay mpitsara Garzón: “Laviko tsotra izao ny didy navoaka nampahafantarina ahy androany “, nivoaka minitra fohy taorian'ny nandrenesany fa mamely azy ny fitondrana:
Nitafatafàna momba ity raharaha ity ny Solombavambahoaka teo aloha, Federico Mayor Zaragoza [1 ]. Noho ny maha olona fanta-daza azy izay mavitrika tamin'ny fanohanany mavitrika ny hetsika ara-tsosialy #15M dia averinay etoana ny resadresaka nifanaovana taminy:
Azonao vakiana ato  ny resadresaka tamin'ny fiteny niresahana azy.
Sekretera lefitry ny Fanabeazana sy ny Siansa tao amin'ny Governemanta espaniola  (1974–1975) i Federico Mayor Zaragoza, solombavambahoaka UCD  ho an'ny faritr'i Granada  ao amin'ny Parlemanta Espaniola (1977–1978), Mpanolotsainan'ny Filohan'ny Governemanta (1977–1978), Minisitry ny Fampiarana sy ny Siansa (1981–1982) ary solombavambahoaka CDS  ao amin'ny Parlemanta Eoropeana  (1987). Faramparany, niasa ho Tale Jeneralin'ny UNESCO  nanomboka ny 1987 ka hatramin'ny 1999 nandritra ny fotoampiasana indroa misesy. Izy amin'izao fotoana izao no sekretera jeneralin'ny Fikambanana Mpanao Asasoa ho amina Kolontsainam-pandriamphalemana  sy mpikamam-boninahitry ny Taompolon'ny Fampiroboroboana ny Kolontsaina Mandala ny Fandriampahalemana Iraisampirenena sy ny Tsy fanaovana Herisetra Ny Ankizy Manerantany .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/02/22/29009/
 voarara : http://imagenes.publico-estaticos.es/resources/archivos/2012/2/9/1328793153123sentencia%20garzon.pdf
 mpanao politika: https://twitter.com/#!/GLlamazares/status/168369300850216960
 olom-pirenena an-jatony: http://www.congarzon.com
 Laviko tsotra izao ny didy navoaka nampahafantarina ahy androany: http://spainrevolution.com/revolt/?p=7976
 Governemanta espaniola: http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Spain
 faritr'i Granada: http://en.wikipedia.org/wiki/Granada_(Spanish_Congress_Electoral_District)
 Parlemanta Eoropeana: http://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament
 Taompolon'ny Fampiroboroboana ny Kolontsaina Mandala ny Fandriampahalemana Iraisampirenena sy ny Tsy fanaovana Herisetra Ny Ankizy Manerantany: http://en.wikipedia.org/wiki/International_Decade_for_the_Promotion_of_a_Culture_of_Peace_and_Non-Violence_for_the_Children_of_the_World